Mmiri mmiri: ihe ha bụ, njirimara na nhazi | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 13/09/2021 15:39 | Geology
N'ọhịa ihe gbasara ala na ọdịdị ala a mmiri mmiri nke a dị oke mkpa. Ọ bụ ịda mbà n'obi n'ime ala nke gbara ya gburugburu. Na mpaghara a, mmiri niile na -ada n'ime ya, gụnyere mmiri ozuzo na mmiri gbazere agbaze, na -abanye n'otu. N'ógbè dị ala nke kwekọrọ na mpụta nke efere. Nke a bụ ebe osimiri, ọdọ mmiri, osimiri na -etolite ma na -atọgbọ n'ime oke osimiri na oke osimiri.
N'edemede a, anyị ga -agwa gị gbasara ịdị mkpa nke efere mmiri, njiri mara ya na geology.
2 Ụdị mbadamba mmiri
3 Mmetọ na mkpa
4 Nhazi na nhazi nke efere mmiri
Ọtụtụ osimiri nwere ọwa mmiri nke ha, nke na -asọda ala niile. Dịka ọmụmaatụ, mpaghara mmiri niile nke Osimiri Amazon mejupụtara mpaghara mmiri ya, dịkwa ka ọ dị mpaghara mmiri mmiri Osimiri Naịl bụ mpaghara mmiri mmiri gị. Ha bụ isi usoro eke na -ahụ maka ịnakọta na ibufe mmiri na sedimenti.
“Ahịrị” nke na -ekewa ma na -amata ọdịiche dị n'akụkụ mmiri mmiri dị n'akụkụ a ka a na -akpọ "basin", nke na -abụghị ihe ọ bụla karịa usoro ihe owuwu ala nwere oke dị elu iji zere njikọta nke mmiri nke efere ahụ. Ridges, ugwu, ugwu nta na crevasses bụ ọkwa dị iche iche nwere ike ikewa mmiri.
Osisi ndagwurugwu dịgasị iche iche, mana ọ nwere ike pere mpe ka nnukwu, na -ekpuchi ọtụtụ mpaghara obodo wee gbasaa ruo ọtụtụ square kilomita. Ihe kpatara nke a bụ na ọ bụghị naanị otu efere ka efere efere nwere.
Ọtụtụ oge a na -eji nnukwu osimiri emeju obere osimiri ma ọ bụ jikọọ na mmiri ma ọ bụ ọdọ mmiri, yabụ oke mmiri dị na bezin ga -abawanye. Yabụ, nnukwu nnukwu efere nwere nnukwu iyi na ndị na -asọba ya niile, mana ụtụ ọ bụla nwekwara obere efere. Ọmụmaatụ: Osimiri Mississippi nwere obere mmiri mmiri 6. Ọdọ mmiri Amazon bụ osimiri kachasị ukwuu n'ihi na ya na ndị ọrụ ya niile nwere mpaghara mmiri mmiri karịrị nde kilomita asaa.
Ọwa mmiri bụ usoro eke sitere n'okike na -ahụ maka ịnakọta na ibufe mmiri na sedimenti n'ime osimiri, iyi, na ụzọ mmiri ndị ọzọ. Ọnụ mmiri mmiri na -asọ na -adabere na mmiri ozuzo na -eme, ikike ịmịkọrọ mmiri, nbanye na saturation nke ala, ọdịdị ala (ewepụghị, sloping, wdg), ntụgharị osisi, ikuku mmiri na ihe ndị ọzọ. Kedu ihe ọzọ, oke mmiri nke ụmụ mmadụ na -eji oke mmiri eme ihe ga -ebelata oke mmiri n'ime efere.
Ụdị mbadamba mmiri
Enwere ụdị efere hydrographic dị iche iche dabere na usoro ọmụmụ ha na ebe achọtara ya. Ka anyị hụ ndị bụ isi:
Ọdọ mmiri. Ha bụ mpaghara osimiri na ndị na -asọpụrụ ya na -asọpụta, dị ka ihe atụ a kpọtụrụ aha n'elu. Agbanyeghị, enwere ụdị mmiri mmiri ndị ọzọ
Basin owuwu. A na -akpụ ha site na ịkwaga efere tectonic. Ha na -ahụkarị na mpaghara kpọrọ nkụ.
Efere ime ụlọ. Mmiri ya adịghị asọba n'oké osimiri ma ọ bụ n'oké osimiri, mana ọ na -agbachapụ ma ọ bụ mikpuo n'ala. Osisi ndị a na -arụ ụlọ nwere sistemụ mmiri igbapu n'ime.
Ọdọ mmiri ọdọ mmiri. A na -egbochi efere tectonic dị na ndagwurugwu site na irighiri ihe, okwute ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na -egbochi ịhapụ mmiri, si otú a bụrụ ọnyà n'ime mpekere na imepụta ọdọ mmiri.
Ebe a na -eri nri. Ha bụ efere ọdọ mmiri nke nwere nrụrụ arụ nke nwere nkụda mmụọ dị obere nke mejupụtara akwa okwute na ihe ndị sitere n'okike.
Basin osimiri. Ha na -emetụta oke nkụda mmụọ nke oke osimiri ụwa dị na ya, yabụ n'oké osimiri ọ bụla enwere efere
Mmetọ na mkpa
Mmetọ na ime obodo bụ ụfọdụ ihe egwu dị egwu na -eyi mmiri mmiri nke ụwa egwu. Mmiri mmiri na -arụ ọrụ dị mkpa n'ịchekwa gburugburu ebe obibi na ndụ nke ihe ndị dị ndụ, gụnyere mmadụ. Mmiri bụ otu n'ime akụ sitere n'okike kachasị mkpa n'ụwa ma dị mkpa maka oriri mmadụ niile.
Mmetọ, ime obodo na imebiga ihe ókè (ụdị anụmanụ na ihe ọkụkụ nke mmiri, mineral, wdg) nke mmiri ya bụ nnukwu ihe egwu na -etinye ọnụnọ ha n'ụwa. Ọtụtụ gọọmentị ehiwela ndị na -ahụ maka njikwa mmiri mmiri, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọ bụla nwara ilekọta mmiri ahụ na -enyekwa aka ichekwa ọwa mmiri.
Mmiri mmiri dị mkpa maka mmepe nke gburugburu ebe obibi na ọrụ mmadụ. Kedu ihe dị mkpa nke efere ahụ? Anyị na -egosi gị ụfọdụ ọmụmaatụ:
Nke mbụ, mezie usoro mmiri, yabụ ọnụnọ ya na -ebelata ihe egwu nke ọdachi ndị dị ka idei mmiri ma ọ bụ mbuze.
Ọzọkwa, mezie ịdị mma mmiri ma bụrụ isi iyi nke ezigbo mmiri, nri maka ụdị ihe dị ndụ dị iche iche nke bi n'ụwa.
Ebe ọ bụ na mmiri na -asọba na efere dị ngwa ngwa, anyị nwere ike nweta ọkụ eletriki iji rụọ ọrụ anyị.
N'ikpeazụ, anyị enweghị ike ịgọnarị ịma mma nke ọwa mmiri, nke na -abụkarị akụkụ nke ntụrụndụ anyị.
Nhazi na nhazi nke efere mmiri
N'okirikiri mmiri, mmiri ozuzo na -anakọta n'ime obere ọwa nke na -etolite mkpọda iji mepụta efere mmiri, na -emepe ọtụtụ ọwa nke obere oge. Akụkụ nke mmiri ozuzo na -ekupụta ma ọ bụ na -amaba na akụkụ nke ọzọ na -agbada na mkpọda. Mgbe ọwa mmiri buru ibu, oke elu ya na oke ala nwere ike wepụta mmiri na -adịgide adịgide, na -eme bezin mmiri zuru oke.
A na -ekewa mmiri dị iche iche n'ọtụtụ akụkụ. Ka anyị hụ ihe ha bụ:
Basin dị n'elu: ọ bụ mpaghara ebe isi iyi ahụ dị na mpaghara mkpọda na ugwu.
Efere etiti: Ọ bụ mpaghara kwekọrọ na ndagwurugwu nke osimiri, ebe, n'ozuzu ya, zigzags.
Basin ala: Ọ bụ mpaghara dị ala ebe osimiri na -efufu ọsọ ọsọ, ike na nsị ihe niile anakọtara, na -akpụ ala.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ihe mmiri mmiri bụ, njirimara ya na mkpa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Mmiri mmiri
Akwụkwọ a na -atọ ụtọ, na -aga n'ihu na -eme ka ihe ọmụma anyị baa ụba.